शेयरबजारको आकार ३० अर्बमाथी
काठमाडौं। आइतवार शेयरबजार सूचकांक र कुल बजार पूँजीकरणले सर्वाधिक उचाइको रेकर्ड कायम गरेको छ । आइतवार नेप्से परिसूचक ४१.२४ अंकले बढेर २२३५.७२ को आजसम्मको सर्वाधिक उच्च विन्दुमा पुगेको छ । त्यसैगरी शेयरबजारको आकार रू. ३० खर्ब ११ अर्ब ४१ करोड ६० लाख ७४ हजारको भएको छ ।
गत बिहीवार रू. २९ खर्ब ५५ अर्ब ८६ करोड ४० लाख ६५ हजार रहेको कुल बजार पूँजीकरण आइतवार एकै दिन रू. ५५ अर्ब ५५ करोड २० लाखले बढेर सर्वाधिक बन्न पुगेको हो । साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचकसँगै सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ७ दशमलव २१ अंकले बढेर ४२८ दशमलव ४३ बिन्दुमा पुगेको छ । यसै गरी फ्लोट इन्डेक्स ३.५५ अंक र सेसेन्टिभ फ्लोट इन्डेक्स ३.०३ अंकले बढेको छ ।
यो दिन कारोबार रकम पनि रू. ६ अर्ब ३२ करोड ६६ लाख ४६ हजार बराबरको रहेको छ । २०७ कम्पनीको ५७ हजार १७१ पटकको व्यापारमा उक्त रकम बराबरको १ करोड ५० लाख ३० हजार ८३६ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो ।
नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि बढ्दै गएकाले लगानीकर्ताहरू उत्साहित भएका छन् । नेप्से परिसूचकको वृद्धिलाई कारोबारको आकारले पनि साथ दिएकाले परिसूचक बलियो भएको र अझै यो बढ्दै जाने सम्भावना देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
उच्च अंकले बढेको बजारमा २०७ कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छ । यस दिन १३२ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ ।
आइतवार प्रभु बैंकको सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको छ । प्रभु बैंकको रू. ४० करोड २९ लाख ९१ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । कुल कारोबार रकममा यो दिन प्रभु बैंकको ६ दशमलव ३७ प्रतिशत अंश रहेको छ ।
त्यस्तै प्रभु लाइफको शेयर मूल्य सर्वाधिक १० प्रतिशतले र पाँच कम्पनीको शेयर मूल्य ९ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । आइतवार नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको ९ दशमलव ९७ प्रतिशत, कुमारी बैंकको ९ दशमलव ८९ प्रतिशत, आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ९ दशमलव ८९ प्रतिशत, युनाइटेड फाइनान्सको ९ दशमलव ८८ प्रतिशत र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको ९ दशमलव ८८ प्रतिशतले शेयर मूल्य बढेको हो ।
यस दिन ५० कम्पनीको शेयर मूल्य घट्दा निर्धन उत्थान लघुवित्तको शेयर मूल्य ४ दशमलव ३१ प्रतिशतले घटेको छ । यस कम्पनीले आइतवार नै लाभांश सार्वजनिक गरेको थियो ।
आइतबार जीवन बीमा समूहको परिसूचक शून्य दशमलव १२ प्रतिशतले घटेको छ भने बाँकी समूहको बढेको छ । आइतवारको बजारमा विकास बैंक, वाणिज्य बैंक र व्यापारिक समूहको परिसूचक ३ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । विकास बंैकको ३ दशमलव ९८ प्रतिशत, वाणिज्य बैंक समूहको ३ दशमलव ५९ प्रतिशत र व्यापारिक समूहको ३ दशमलव १७ प्रतिशतले परिसूचक बढेको हो ।
यस दिन होटेलको १ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत, जलविद्युत्को १ प्रतिशत, वित्तको २ दशमलव १५ प्रतिशत, निर्जीवन बीमाको शून्य दशलमव ३९ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको शून्य दशमलव ४५ प्रतिशत, अन्यको शून्य दशमलव १८ प्रतिशत, लघुवित्तको शून्य दशमलव ६३ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव ६६ प्रतिशत परिसूचक बढेको हो ।